Shiinaha Palmitoyl Tetrapeptide-7 warshad iyo saarayaasha | JYMed
Magaca Product: Palmitoyl tetrapeptide-7
Formula kelli: C34H62N8O7
Miisaanka kelli: 694,919 g / mol
Codsiyada: Relief caabuq iman kara maqaarka, maqaarka caafimaad
Palmitoyl tetrapeptide-7 waa nooc ka mid ah xarunta peptide dardaro oo isku daraa dhawr silsiladood oo acids amino si loo yareeyo bararka maqaarka iyo dhaawaca maqaarka la socda. waxaa sidoo kale la rumeysan yahay xarunta peptide Tani in ay kicin cusboonaysiinta, macdantaa collagen in maqaarkaba ah by simaha sida sort of Rasuul gacanta. Palmitoyl tetrapeptide-7 waxaa sidoo kale loo malaynayaa in la kordhiyo xaddiga hyaluronic acid ee maqaarka, taas oo ka caawin kara adkayn maqaarka by jiitay qoyaan si epidermis. In kasta oo kiimiko ah waxaa loo arkaa inay ammaan ah si loogu isticmaalo daryeelka maqaarka, awoodda qayb si ay u dumin Midabka maqaarka oo keeni karta in arrimaha midab maqaarka. Haddii aad qorsheyneyso in aad ku darto waxyaabaha la tetrapeptide-7 palmitoyl in aad wax soo saarka daryeelka maqaarka, sidaa sameeyaan si tartiib tartiib ah, iyo doorbidayaa daryeelka ee haragga.
Palmitoyl tetrapeptide-7 waxaa loo tixgeliyaa in ay walax la doorbidaa si loogu isticmaalo alaabta la isku qurxiyo ay sabab u tahay awooddiisa ah inuu dhex gelin maqaarka iyo samatabbixin ah maaddooyinka kale ee gabowga anti qoto dheer galay unugyada maqaarka. Tayada milmi in saliid doorashada ugu saxsan ee ereygu la xeryahooda caadiga ah loo isticmaalo alaabta maqaar oo si gaar ah wax soo saarka gabowga anti ka dhigaysa, tan iyo isku ah waxay u badan tahay in ay sii joogaan u simanyihiin. Si aad u hesho warbixin buuxda ku xeeran arrimaha shiidka, waxyeelooyinka suurogalka ah ay sabab u tahay isticmaalka daba dheeraaday iyo arrimo kale, tetrapeptide-7 palmitoyl this la gudbiyey Barnaamijka Diiwaangalinta Voluntary qurxinta ee 2012 si loo ansixiyo FDA.
In dhowrkii sano ee la soo dhaafay, our urur nuugo oo ku milmaan gobolka-of-the-art teknoolajiyada si siman gudaha iyo dibaddaba. Dhanka kale, shaqaalaha ganacsiga our koox khubaro sooco xagga koritaanka Xulashada SYAO Peptide qurxinta/ Beauty Peptide Palmitoyl Tetrapeptide-7 / palmitoyl Tetrapeptide Cas 221227-05-0, hada waxaan afar xal keenta. Products waa kuwa ugu waxtarka badan iibiyey ma aha oo kaliya inta lagu guda jiro suuqa Chinese, laakiin sidoo kale soo dhaweeyay inta lagu guda jiro suuqa caalamiga ah.
In dhowrkii sano ee la soo dhaafay, our urur nuugo oo ku milmaan gobolka-of-the-art teknoolajiyada si siman gudaha iyo dibaddaba. Dhanka kale, shaqaalaha ganacsiga our koox khubaro sooco xagga koritaanka Palmitoyl Tetrapeptide-7, Cas 221227-05-0, Palmitoyl Tetrapeptide-3, Sida saaraha khibrad waxaan sidoo kale aqbalaan si habka iyo annana waannu ka dhigi karin sida aad sawirka ama arrimo ka sooca muunad. Ujeedada ugu weyn ee shirkadda waa in ay ku noolaadaan xasuusta lagu qanci karo in macaamiisha oo dhan, iyo in la dhiso xidhiidh muddo dheer ganacsi la iibsada iyo users dunida oo dhan.